UBill Bill Gates Ngoku unengxaki yakhe yeJeffrey Epstein - Ezintsha
Eyona Ezintsha UMsunguli weMicrosoft Bill Gates ngoku unengxaki yakhe kaJeffrey Epstein
UMsunguli weMicrosoft Bill Gates ngoku unengxaki yakhe kaJeffrey Epstein
UBill Gates wakhawuleza wazikhwebula kwimikhwa emibi kaJeffrey Epstein, nangona wayevuma ukuba uyazi ngabo-kwaye, ewe, bebeyingxaki.Ifoto nguJack Taylor / Getty Izithombe
Ngethamsanqa lakhe elingaphezulu kwe- $ 100 yezigidigidi, umsunguli weMicrosoft uBill Gates ungowesibini- okanye indoda yesithathu esisityebi emhlabeni, kuxhomekeke kumhla . UBill Gates ’ abahlobo kunye nabaqhelana nabo bayalela ubutyebi bokuqonda ukuqonda: UWarren Buffett, ubutyebi babo iForbes pegs ngexabiso eliphantsi $ 82 billion , ngomnye wabo.
Ngokudibeneyo, uBuffett kunye noGates mhlawumbi kwigama lokuqala uninzi lwabantu abazizityebi baseMelika. Ngo-2010, njengoko Reuters ingxelo ngelo xesha , bona, kunye nenkosikazi kaGates uMelinda, bachitha uninzi lwentlanganiso yonyaka kunye neshumi elinambini lezityebi zaseMelika ukubanyanzela ukuba banikezele ngobutyebi babo.
BONA KWAKHO: Ngokuqinisekileyo kukhangeleka ngathi uJeffrey Epstein wayeyimpimpi-Kodwa ngokabani?
Abantu abazizityebi bayabazi abanye abantu abazizityebi. Yi le inyani . Ukuba ukhe wafuna ukudibana nabantu abazizityebi, uBill Gates uya kuba ngumntu omaziyo. Ingayiyo i umntu omaziyo. Kungenxa yeso sizathu le nto izizathu zikaGates zokuhlangana nomntu ogwetyelwe ukuxhaphaza ngokwesondo kunye nomrhwebi otyhola ngokuthengisa ngesondo uJeffrey Epstein, owazixhoma kwisisele saseManhattan nge-10 ka-Agasti- uEpstein wayesazi abantu abaninzi abazizityebi abakwaGates mhlawumbi bafuna ukubabetha. imali, njengoko uGates watsho Ijenali yeWall Street kudliwanondlebe olupapashwe ngoLwesibini-kudala imibuzo engakumbi ukuba iyaphendula.
BONA KWAKHO: IBill Bill kwi-Coronavirus vs Economy: 'Akukho Nxalenye yoMhlaba ophakathi'
Udliwanondlebe lweGates luqulathe ibango eliphikiswa yibhombu (kwaye ifunwa kakuhle) ENew Yorker Inqaku elipapashwe ngempelaveki, emva kweGates ’ WSJ Udliwanondlebe lwenziwa kodwa ngaphambi kokupapashwa-kwaye luphuhliso nje lwamva nje lwento ngoku ingxaki eqhubekayo kunye ne-Epstein Usihlalo wangaphambili kaMicrosoft.
Umbuzo wam kaJeffrey Epstein womhla:
KUTHENI EMHLABENI KUNOKUTHETHWA UMTHETHO OYILWAYO KUNYE NE-LEON EMNYAMA KUFUNEKA I-EPSTEIN YOKUQHUBA IZIPHO ZOKUKHIPHA IGAMA LABO?
Banemibutho yabo yokulawula olu hlobo lwezinto.
-UStephanie Ruhle (@SRuhle) NgoSeptemba 8, 2019
Embindini ka-Agasti, I-CNBC yaba yeyokuqala ukunika ingxelo ukuba uGates uthathe intlanganiso eNew York kunye no-Epstein kwi-2013, kwiminyaka eliqela emva kokuba u-Epstein esebenze isigwebo sakhe seenyanga ezili-13 esentolongweni ngokucela ihenyukazi elingaphantsi kweminyaka. Amasango kubonakala ngathi atyhafile ngenxa yephulo elinamandla lokuloba elenziwe ngu-Epstein, obhale abahlobo kunye noosomashishini ukukholisa umsunguli weMicrosoft ukuba athathe intlanganiso.
Isebenzile. Esi sibini saxoxa ngobubele, njengoko I-CNBC ixeliwe . Amasango nawo abhabha ubuncinci kube kanye kwenye yeenqwelomoya zika-Epstein-kodwa hayi kwiLolita Express eyaziwayo, inqwelomoya ekuthiwa yayisetyenziselwa ukuvalela amantombazana angaphantsi kweminyaka kwisiqithi sabucala sase-Epstein kwiCaribbean.
Kodwa akuphelelanga apho. Kungekudala emva kokuba u-Epstein ezibulele ngokuxhoma kwindawo yomdibaniselwano ngelixa ejongene nomrhumo wokurhweba ngokuthengisa ngesondo, kwavezwa ukuba uBoris Nikolic, owayengumcebisi wesayensi wangaphambili kaGates, wachongwa njengomphumeleli wolondolozo lomyolelo ka-Epstein. UNikolic wakhanyela ngokuqatha naluphi na unxibelelwano.
Kwaye emva koko, kwimpelaveki, uRonan Farrow wanyusa ubushushu kwiiGates, Ukunika ingxelo kwi ENew Yorker yayingu-Epstein owayalela okanye wacebisa ukuba iGates inikele nge-2 yezigidi zeedola kwi-MIT Media Lab, umlawuli wayo esele arhoxile.
Kwi ENew Yorker , Abantu bakaGates babonakala bechaza ubudlelwane besihlalo wangaphambili kaMicrosoft noEpstein njengohlobo lokwazana olungabandakanyi naluphi na uhlobo lweengcebiso ngezemali. [Ibango elitsha lokuba u-Epstein uyalele nayiphi na inkqubo okanye isibonelelo sobuqu seBill Gates bubuxoki ngokupheleleyo, utshilo isithethi kwiphephancwadi.
Ngolwesibini, WSJ ipapashe udliwanondlebe olude kunye noGates apho wayebuzwa malunga nobudlelwane bakhe no-Epstein.
Ndadibana naye. Andizange ndibenabo ubudlelwane beshishini okanye ubuhlobo kunye naye. Khange ndiye eNew Mexico okanye eFlorida okanye ePalm Beach okanye nakweyiphi na, Kuxelelwe uGates WSJ . Kwakukho abantu ababemngqongile ababesithi, 'hey, ukuba ufuna ukukhulisa imali yezempilo kwihlabathi liphela kwaye ufumane ububele obuninzi, uyabazi abantu abaninzi abazizityebi.'
UGates wakhawuleza wazikhwebula kwimikhwa emibi ka-Epstein, nangona wayevuma ukuba uyazi ngabo-kwaye, ewe, babeluhlobo lwengxaki.
Yonke intlanganiso apho ndandikunye naye yayiziintlanganiso zamadoda, uGates uxelele iphepha. Andizange ndikhe ndiye nakwamanye amatheko okanye nantoni na enjalo. Akazange anike mali kuyo nantoni na endiyaziyo.
I-imeyile phakathi kwamagosa eMIT afunyenwe ENew Yorker Ucacisile ukuba isipho sikaGates esixabisa i-2 yezigidi zeedola kwiMedia Lab ngo-Okthobha u-2014 yayijoliswe ngu-Epstein, ogama lakhe lalingafakwanga kuluhlu njengesikhuthazo sesipho ngenxa yerekhodi lakhe lolwaphulo-mthetho. Amasango enza esi sipho ngengcebiso yomhlobo wakhe onqwenela ukuhlala engaziwa, elinye igosa leMIT labhala.
Imvelaphi yobutyebi bukaEpstein, eqikelelwa kwizigidi ezingama-577 zeedola ngokwentando yakhe, ayikacaci. Uyaziwa ngokulawula imali koosozigidigidi, kodwa kubonakala ngathi uchithe uninzi lwamashumi ambalwa eminyaka edlulileyo esenza ukuthanda kwabantu abanamandla nabazizityebi-ukucela nokulungiselela iminikelo, ukugcina ubudlelwane noBill Clinton kunye noDonald Trump- ukuze benze ukuthanda kwabo Abanye abantu abazizityebi nabanamandla, njengoBill Gates.
Iyavakala ukuba kutheni uEpstein efuna iBill Gates. Iyavakala ukuba kutheni uBill Gates efuna uJeffrey Epstein- umntu owonileyo onezinye iziphene (eyona ndlela intle yokuchaza umntu otyholwayo, othembekileyo, wesondo). Amasango kusafuneka anike ingxelo eyoneleyo kolu lwalamano, kwaye ukuba iinkcukacha ezithe vetshe ziyaphikisana nenguqulelo yakhe yeziganeko, ukunganyaniseki kwakhe kuya kuba krokra ngakumbi.
Ngaba i-HBO 'yoBusuku' yayinguMsebenzi wobugcisa? Kukho Ukuthandabuza Okufanelekileyo
'Ilanga Ikwayinkwenkwezi' Kufana nokubukela ixesha elide, iVapid Instagram Story
jane fonda kunye neenyibiba zikatomily lily
indlela yokunyanga usulelo lwebhaktiriya ngaphandle kwee-antibiotics
ungathengisa phi isilivere?
Ukukhangela simahla kwifowuni ngaphandle kweendleko